Semalt: Iifayile zeWindowsPress - Zingaphi Ufanele Uzisebenzise?
I-WordPress isebenza ngobuninzi belizwe malunga nesicelo sayo. Ngenye yeCMS engcono kakhulu apho. Iiblogi ezininzi kunye neCommerce startups ziqwalasela i-WordPress ngenxa yokunyaniseka kwayo kwizinto ezinikelayo - softshell stoff sterne schwarz. Ukongezelela, iiwebhusayithi zeWebPress ziza kunye neendidi ezahlukeneyo kunye nezilungelelwaniso ukuhambelana neemfuno zakho zewebhu. Inkohliso enye yokwenza ngokulula kukusebenzisa ukusetyenziswa kweefowuni. Iiplagizi ziyinxalenye yendaba yakho ye-WordPress engayongeza intengo kwiwebhusayithi yakho.
Iiplagizi zinceda ngeendlela ezininzi ngakumbi xa ufuna umsebenzi osiko. Kufuneka uqaphele ukuba ezininzi iiplagizi ze-WordPress ziza njengeengxenye zeemxholo. Utshintsho lungalahleka xa utshintsha okanye uguqula umxholo wakho. Nangona kunjalo, ezinye iiplagizi ze-WordPress ezithile zendawo zigcina ezinye zeefowuni zenkxaso kwiimeko. U-Alexander Peresunko, ingcali ehamba phambili ye-10 (Semalt , ichaza ukuba ukusetyenziswa kweefowuni kunokuchaphazela ukusebenza komxholo wakho.
Zingaphi iiplagi ze-WordPress 'zininzi'?
Njengoko kuboniswe ngasentla, iifowuni ziyi-PHP zekhowudi ezongezelelweyo ezongeza ukusebenza kwiwebhusayithi yakho yangoku ye-WordPress. Nangona kunjalo, njengoko uqhubeka nokuzithoba kwiwebhusayithi yakho, ixesha lokuphendula le nkqubo lingaqalisa ukuhlalisa. Iiwebhusayithi ezinokuzithoba zihamba kakhulu, zichaphazela kakubi injini yokukhangela i-rankings. Njengoko kuboniswe ngasentla, ii-workshops zisebenza ngokungongeza imigca yekhowudi kwiwebhusayithi jikelele. Kule nkalo, njengekhowudi yokwandisa indawo, iyancipha..I-Google isebenzisa ukuphendula kwewebhusayithi njengento yokubeka kwi-SERP yazo.
Ngokomzekelo osebenzayo, ukuba usebenzisa iiplagi ezilula ezingaphezu kwe-30, abanakho ukuguqula ukuphendula kwewebhusayithi yakho. Kwamanye amaxesha, ukubeka ikhowudi enkulu kwiwebhusayithi yakho kukuchaza ixesha lakho lokuphendula. I-plugin eneempendulo ezininzi zinokuchaphazela efanayo kwiwebhusayithi isebenzisa ezininzi iiplagi. Nje ngekhowudi yewebhusayithi, kufuneka ukhumbule malunga nekhowudi indawo esebenza ngayo.
Ziziphi iiplagi ezifanelekileyo zokuzisebenzisa?
Isigqibo sokusebenzisa i-plugin ye-WordPress sincike kuwe. Unokufuna ukufikelela kwisiphumo esicacileyo. Kule meko, kunokubaluleka ukwenza iplagidi yakho yangokwezifiso. Kwinqaku yangaphambili, kukho iindlela ezininzi zokuphuhlisa iifowuni ezilula. Ufuna nje ulwazi lobuchwephesha lwefayile yefayile yeWindowsPress. Ngokufanayo, unokufuna ukukwazi ukuhlela ifayile ye-PHP usebenzisa i-notepad elula.
Iiplagizi aziyiyo inketho-kufuneka. Nangona kunjalo, kukho ezinye iiplagi eziyimfuneko ezingenza ukuba iwebhusayithi yakho ibe ngcono. Ezinye ze-plugin ze-WordPress ziquka:
I-WordPress SEO nge Yoast:
Kubantu abafuna ukulungiselela indawo yabo yokubonakalisa injini ye-injini, le plugin iqulethe zonke iinkalo ezibalulekileyo ze-SEO. Ukusuka kwigama eliphambili lokukhangela ukucaciswa kweemeta, kukho iimeko ezininzi apho abantu benza izicwangciso ezifanelekileyo.
Yiyo yonke into eplasini enye enceda umntu ukulawula iinkalo ezibalulekileyo zeenkcukacha zakho. Ngokomzekelo, unokwazi ukwengeza okanye ukulungisa i-database yakho. Ungalondoloza kwakhona iwebhusayithi yakho ukuguqula utshintsho xa kwenzeka into engalunganga.
I-W3 I-Cache Iyonke:
Le plugin inokukunceda iwebhusayithi yakho ithuthukise izithuthi. Inceda ukugcina umsebenzisi oye watyelela ngokubanika ezinye iintengiso kwiwebhusayithi yakho.